Wararka Maanta: Arbaco, Jun 12, 2019-Marekanka oo ballan-qaaday inuu xoojinayo howlgallada uu ka fuliyo Soomaaliya
War-saxaafadeed laga soo saaray kulan ay shalay Muqdisho ku yeesheen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, taliyaha ciidanka xoogga, taliyaha hawlgalladda militariga Maraykanka ka jooga qaraadda Afrika ee AFRICOM, Jeneral Thomas Waldhauser iyo Danjiraha Maraykanka u jooga Soomaaliya, Donald Yamamoto ayaa ballanqaadka lagu sameeyay.
"Taageerada nabadgalyo ee Soomaaliya waxay qeyb muhiim ah ka tahay dedaalka uu Marekanka dowladda federaalka iyo dadka Soomaaliyeed lagala shaqeynayo ammaanka iyo nabadda dalkooda." ayuu yiri Danjiraha Maraykanka u jooga Soomaaliya, Donald Yamamoto.
" Degganaashaha iyo nabadda Soomaaliya micnaheedu waa deganaashaha dheeriga ah ee mandiqadda geeska Afrika iyo inay dadka Soomaalida awoodaan inay diiradda saaraan dhismaha mustaqbal barwaaqo ah." ayuu ku daray Donald Yamamoto.